के हो लागू औषध पोल्यान्ड ?
January 14, 2022 by POLAND NEPAL
पोल्याण्ड, अर्थात् अवैध लागुऔषध । यो नाम अवैध लागूऔषधमा सूचीकृत छ । यसको सीधा अर्थ खरिद–बिक्री गर्न बन्देज हुनु हो । तर, पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंमा यसको अधिक प्रयोग हुन थालेको पाइएको छ । धेरै व्यक्तिहरु पोल्यान्ड प्रयोग गरेवापत पक्राउ परिरहेका छन् ।
के हो लागु औषध पोल्याण्ड ?
लागुऔषध पोल्याण्ड खासमा गाँजाको धूलो हो । विशेषगरी चरेस बनाउने उद्देश्यले यसको प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा ८० को दशकमा चरेस बनाउन हातमा घोटेर चोप निकाल्दै चरेस बनाइन्थ्यो, जुन झन्झटिलो थियो ।
त्यसपछि पोल्याण्डका नागरिकले नेपालमा पाइने लागूऔषधबारे थाहा पाए । उनीहरु त्यसैको सेवनका लागि ८० को दशकमा नेपाल आए । उनीहरु नेपाल आइसकेपछि मकवानपुर र धादिङ जिल्ला पुगेर सजिलो तरिकाले चरेस बनाउन सिकाए ।
उनीहरुले गाँजाको बोटलाई काटेर सुकाउने अनि त्यसको पात र झुप्पालाई माड्ने, त्यसपछि तयार हुने धूलोबाट चरेस बनाउन सिकाए । कतिपय नेपाली नागरिकले पनि यही तरिकाले चरेस बनाउन थाले । यही तरिकालाई नै त्यो बेलादेखि ‘पोलिस’ वा पोल्याण्डको नामसँग जोडियो । लागुऔषध कारोबारीहरु त्यहीबेलादेखि गाँजाको धूलोलाई पोल्याण्ड भन्न थाले । प्रहरीले पनि त्यो लागूऔषधलाई पोल्याण्ड नै भन्न थाल्यो ।